mercredi, 31 juillet 2019 21:13
Kitra - COSAFA Women 2019: Madagasikara 0 - 2 Malawi
Lavon’i Malawi tamin’ny isa 2 noho 0 i Madagasikara androany teo amin’ny lalao voalohany natrehany tao amin’ny Vondrona A misy azy amin’ny COSAFA Women 2019, tanterahina ny 31 jolay ka hatramin’ny 11 aogositra ho avy izao, atsy Port Elisabeth Afrika Atsimo. Voafidy ho mpilalao mendrika tamin’ity lalao androany ity i Mamy Lalaina Prisca (N°3). I Afrika Atsimo, Kaomôro ary Malawi no firenena iray Vondrona A amin’i Madagasikara. Amin’ny 2 aogositra 2019 ny lalao faharoa hatrehin’i Madagasikara, hihaonany amin’i Kaomôro. Amin’ny 3 aogositra 2019 kosa ny lalao fahatelo ao anaty vondrona, hifandonan’i Madagasikara amin’i Afrika Atsimo mpampiantrano. (Jereo Sary Tohiny)
Andro lehibe ho an’ny taranja volley-ball ny anio sabotsy 27 jolay 2019. Samy hiatrika lalao famaranana hahazoana medaly volamena ny ekipa malagasy sokajy lahy sy vavy. Ao amin’ny kianja mitafon’i Vacaos no hatao ny lalao anio tolakandro. Sokajy vehivavy (2ora 30 ora eto Madagasikara): Madagascar # Seychelles Sokajy lehilahy (4ora 30 ora eto Madagasikara): Madagascar # Maurice (Jereo Sary Tohiny)
Anio sabotsy 27 jolay no hotanterahina ao amin’ny Gymnase Phoenix ny lalao fiadiana ny laharana fahatelo sokajy lahy sy vavy, sy ny lalao famaranana hiadiana ny tompondakan’ny Lalaon’ny Nosy sokajy lahy sy vavy. - Lalao fiadian-toerana: Sokajy vehivavy: Maurice # Seychelles Sokajy lehilahy: Maurice # La Réunion - Lalao famaranana: Sokajy vehivavy: La Réunion # Madagascar Sokajy lehilahy: Madagascar # Mayotte
vendredi, 26 juillet 2019 14:12
Kitra: Namonjy ny kliobany any Frantsa i Bôlida
Tapitra ny fialantsasatra teto Madagasikara ho an’i Lalaina Nomenjanahary na i Bôlida taorian’ny CAN Egypta 2019. Niala an-tanindrazana halina niazo an’i Frantsa izy sy ny vady aman-janany. Mpilalao irakiraka ao amin’ny Barea an’i Madagasikara, nandray anjara tamin’ny CAN tany Egypta farany teo i Bôlida. Milalao ao amin’ny Paris FC izy, ary vao avy nanavao ny fifanarahany amin’io klioba io, nohalavaina hatramin’ny taona 2021.
Rugby – Lalaon’ny Nosy: Lasan’ny Makis ny medaly volamena
Resin’i Madagasikara tamin’ny isa 12 noho 7 i La Réunion nandritra ny famaranana teo amin’ny taranja rugby lalaovin’olona fito, sokajy lehilahy androany. Lasan’ny Makis ny medaly volamena. Maorisy kosa no laharana fahatelo. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 25 juillet 2019 16:49
Cameroun: Nakotroka ny fitsenana ireo mpitsara tamin’ny lalao famaranana ny CAN 2019
Notsenaina tamin’ny fomba makotroka ny fiverenan’ireo mpitsara telo lahy teratany kameroney nitantana ny lalao famaranana tamin’ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra, na CAN 2019 tany Egypta farany teo. Teo i Sidi Néant Alioum Alioum, izay mpitsara afovoany, nampian’i Evarist Menkouande ary Elvis Nguegoue. Fiara maro no namakivaky ny tanànan'i Yaoundé renivohitr’i Cameroun tamin'ny fahatongavan’izy ireo. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 25 juillet 2019 16:27
Kitra: Faha-96 manerantany i Madagasikara
Laharana faha-96 manerantany i Madagasikara taorian’ny CAN natao tany Egypta, araka ny fandaharana navoakan’ny Federasiona iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra tamin’ity volana jolay ity. Nahazo toerana 12 isika niohatra ny tamin’ny volana jona 2019, izay naha teo amin’ny laharana faha 108 an’i Madagasikara.